OTU ESI EWEPU NZAGHACHI NA IGWE OKWU NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Anyị na-ewepu nzaghachi na igwe okwu na Windows 10
Igwe okwu ejikọrọ na kọmputa na Windows 10 nwere ike ịdị mkpa iji rụọ ọrụ dịgasị iche, ma ọ bụ ụda ndekọ ma ọ bụ ịchịkwa olu. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, usoro nke eji ya enwere nsogbu dị n'ụdị mmetụta na-enweghị isi. Anyị ga-anọgide na-ekwu banyere otu esi edozi nsogbu a.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ka nzaghachi nsogbu na igwe okwu. Anyị ga-atụle nanị ngwọta izugbe ole na ole, ebe ọ bụ na ụfọdụ oge, ọ nwere ike ịdị mkpa iji nyochaa njedebe nke mmemme nke atọ iji dozie ụda ahụ.
Hụkwa: Ịgbanye igwe okwu na laptọọpụ na Windows 10
Usoro 1: Ntọala igwe okwu
Ụdị usoro Windows ọ bụla site na ndabara na-enye ọtụtụ ntinye na inyeaka inyeaka maka idozi igwe okwu. Anyị tụlere ntọala ndị a n'ụzọ zuru ezu na ntụziaka dị iche maka njikọ dị n'okpuru ebe a. N'okwu a, na Windows 10, ị nwere ike iji ma ọ bụ njikwa akara ngosi na onye na-elekọta Realtek.
Gụkwuo: Ntọala ekwentị na Windows 10
Na ngalaba ọrụ, pịa nri na akara ngosi ma họrọ ihe dị na listi nke meghere. "Mepee nhọrọ ndị dị mma".
Na windo "Nhọrọ" na ibe "Ụda" chọta ngọngọ "Tinye". Pịa ebe a maka njikọ ahụ. "Njirimara Ngwaọrụ".
Pịa taabụ "Ndozi" ma lee igbe ahụ "Nkwụsịtụ nkwụsị". Biko mara na ọrụ a dị naanị ma ọ bụrụ na enwere ugbu a na, ihe dị mkpa, onye ọkwọ ụgbọala dakọtara maka kaadi kaadị.
Ọ bụkwa ihe amamihe dị na ya iji megharịa ụfọdụ nzacha dịka mkpọchi mkpọtụ. Iji chekwaa ntọala, pịa "OK".
Usoro yiri nke ahụ, dịka e kwuru na mbụ, nwere ike ime na Realtek Manager. Iji mee nke a, meghe windo kwekọrọ na ya "Ogwe njikwa".
Hụkwa: Otu esi mepee "Ogwe njikwa" na Windows 10
Pịa taabụ "Igwe okwu" ma tinye akara na-esote "Nkwụsịtụ nkwụsị". Naghị echekwa ọhụụ ọhụrụ, ị ga-emechi windo na iji bọtịnụ ahụ "OK".
Ihe omume a kọwara dị oke iji kpochapụ mmetụta nke nzaghachi site na igwe okwu. Echefukwala ilele ụda ahụ mgbe ị gbanwee mgbanwe na mpaghara.
Hụkwa: Otu esi elele igwe okwu na Windows 10
Usoro 2: Ntọala ụda
Nsogbu nke ọdịdị mkpuchi nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị na igwe okwu ma ọ bụ ntọala ya na-ezighị ezi, kama ọ bụkwa n'ihi na agbaghasị agbagha nke ngwaọrụ mmepụta. N'okwu a, ị kwesịrị iji nlezianya nyochaa ntọala niile, gụnyere ndị ọkà okwu ma ọ bụ ekweisi. A ghaghị itinye nlebara anya nke ọma na usoro usoro ihe na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, nza "Igweisi okwu gbara gburugburu" emepụta ihe nchoghachi nke na-agbasa na ụda kọmputa ọ bụla.
Gụkwuo: Ntọala ụda na kọmputa na Windows 10
Usoro 3: Ngalaba Ngwá Ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-eji okwu ọ bụla nke atọ ma ọ bụ ndị na-edekọ ụda nke nwere ntọala nke aka ha, ị ga-enyochakwa ya abụọ ma gbanyụọ mmetụta ndị na-adịghị mkpa. N'ihe atụ nke usoro Skype, anyị kọwara nke a n'ụzọ doro anya n'otu isiokwu dị iche na saịtị ahụ. Ọzọkwa, ntughari akọwapụtara niile na-ejikarị aka na sistemụ ọ bụla.
Gụkwuo: Otu esi ewepu nchoghachi na Skype
Usoro 4: Nchọpụta nsogbu
Ọtụtụ mgbe, ihe kpatara nzaghachi ahụ na-ebelata na arụ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị nke igwe okwu n'enweghị mmetụta nke nchịkọta nke atọ ọ bụla. Na nke a, a ga-enyerịrị ngwaọrụ ahụ ma, ọ bụrụ na o kwere omume, dochie ya. Ị nwere ike ịmụta banyere nhọrọ ụfọdụ nke nsogbu na ntụziaka dị mkpa na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Nchọpụta nsogbu Okwu okwu okwu na Windows 10
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụrụ na nsogbu ahụ akọwapụtara, iji kpochapụ mmetụta nchoghachi, ọ bụ iji rụọ ọrụ na ngalaba mbụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ dị na Windows 10. Ọzọkwa, n'ihi ịdị adị nke ọtụtụ ụdị ihe ndekọ nke ihe ndekọ, ihe niile anyị kwadoro nwere ike bụrụ ihe na-abaghị uru. A ghaghị iburu akụkụ a n'uche na iburu n'uche ọ bụghị naanị nsogbu nke sistemụ arụmọrụ, kamakwa, dịka ọmụmaatụ, ndị ọkwọ ụgbọala nke onye na-emepụta igwe okwu.